Ciidamada Janan oo weeraray Beled-Xaawo & dagaal ka socda - Awdinle Online
Ciidamada uu hoggaaminayay Wasiirka Amniga Maamulka Jubbaland cabdi rashiid Xasan Cabdi Nuur Janan ayaa xalay saqdii dehxe waxaa ay weerar ku qaadeen Degmada Beled-Xaawo ee gobolka Gedo, halkaas oo ay dowladda Soomaaliya Ciidamo diyaarado ku geysay.
Dadka degmada ayaa ku waramay in dagaal culus uu ka dhacay Gudaha degmada Beled-Xaawo, waxaana warar soo baxay ay sheegayeen in Ciidamada Jubbaland ee weeraray Beled-Xaawo ay la wareegeen meelo kamid ah degmada.
Wararka la helay ayaa sheegaya in meelaha ciidamada Jubbaland ay la wareegeen ayaa waxaa kamid ah Dabaqa shirkadda hormuud,meel u dhow saldhiga Beled-Xaawo, iyo kastamka.
Dagaal ayaa saaka markale ka bilaawday degmada Beled-xaawo, waxana la sheegay in isgaarsiinta Magaalada ay go’an tahay, balse uu ka socdo dagaal leysku adeegsanayo hubka noocyadiisa kala duwan.
Khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo labada dhinac ah ayaa ka dhashay dagaalka, waxaana dadka degmada qaarkood ay bilaabeen inay ka barakacaan dagaalka.
Dowladda Soomaaliya oo ka hadashay dagaalka ayaa cambaareysay, waxana ay sheegtay in maleeshiyaad ay hubeysan Kenya ay soo weerareen degmada Beled-Xaawo ee Gobolka Gedo.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta Soomaaliya Cismaan Dube ayaa sheegay n Jabhad fallaago ah oo ay soo hubaysay Dowladda Kenya ay u soo tallaabeen xuduudda Soomaaliya ayna soo weerartay Gobolka Gedo, gaar ahaan Degmada Beled Xaawo. CXD ayaa si geesinimo leh ugu jilib dhigay duulankaas sharci-darada ah.
Previous articleMareykanka oo Dowladda & mucaaradka uga digay doorasho hal dhinac ah
Next articleSaraakiil loo xir xiray dilka Maareeyihii dekadda Kismaayo